Dhageessaniittuu? Mee waan Abyi jedhuuf nafxanyaan jettu qalbiin dubbisaa dhaggeeffadhas. – Kichuu
Dhageessaniittuu? Mee waan Abyi jedhuuf nafxanyaan jettu qalbiin dubbisaa dhaggeeffadhas.
Viidiyoon armaan gadii kun waggaa 1 duradha
#Iccitii_Jabduu Madda #FSM
“Minilik Oromoo dha; Goota Oromooti. Garuu ABO fi Wayyaanetu maqaa isaa balleesse waan taheef suuta suuta hojii isaa leellisnee ummata fudhachiisna. Itoophiyaan daandii immiyyee Minilik baaseen malee hin ceetu” MM Abiyyi Ahimad.
Tibba kana waa’ee kabaja Ayyaana Adawaatu faarfamaa jira. Eeyyee, Oromoonni hedduun gootummaadhaan duulanii Adawaa irratti lolanii jiru. Wareegamas kaffalanii jiran. Kanaaf, yaadannoo lola Adawaa keessatti Oromoon bakka guddaa qabaata.
Tibba kana garuu maqaa “Ayyaana Adawaa” kanaan shira guddaatu Oromiyaa keessatti tolfamaa jira. Ayyaanni kun faarfannaa immiyee fi suuraa Minilikii fi Xaayituutiin guutuu Oromiyaatti akka kabajamuuf Koreen Naannoo Oromiyaa haga gandaatti ijaaramee shaakalarra jira.
FSMn odeeffannoo argateen Koreen sadarkaa Oromiyaa kun Addisuu Araggaatiin kan hoogganamu yoo tahu, haga gandaatti Qindeessituun Koree Ayyaana kanaas dhaabbatee jira. Qophileen faaruu “immiyyee Itoophiyaa fi immiiyyee Minilik” baandiwwan magaalaa fi Maarshii Poolisiitin shaakalaama jiran. Garuu ijoolleen baandii baayyeen waan harkatti didaniifi guddoo waan milka’aa jiran hin fakkaatan ammaaf.
Tahus, gidiraan yeroo ammaa maqaa Ayyaana kanaatin xaxamaa jiru kaayyoo MM Abiyyi Ahimad Sagantaa Minilik 2ffaa itti fufsiisuuf qabatee kahe keessaa kan duraati jechuudhaan qeequ kanneen dubbii keessa beekan.
Sababaan isaanii guddaan ammoo dubbii Abiyyi Ahimad ji’a Fulbaanaa keessa, leenjii dabballee irratti dubbatee dha. Leenjii sanararrti Abiyyi Ahimad akkas jedhe ture,
“Minilik Oromoo dha; Goota Oromooti. Garuu ABO fi Wayyaanetu maqaa isaa balleesse waan taheef suuta suuta hojii isaa leellisnee ummata fudhachiisna. Itoophiyaan daandii immiyyee Minilik baaseen malee hin ceetu” Koloneel Abiyyi Ahimad tu jedhe.
Tibba kana garuu maqaa “Ayyaana Adawaa” kanaan shira guddaatu Oromiyaa keessatti tolfamaa jira. Ayyaanni kun faarfannaa immiyee fi suuraa Minilikii fi Xaayituutiin guutuu Oromiyaatti akka kabajamuuf Koreen Naannoo Oromiyaahanga gandaatti ijaaramee shaakalarra jira.
FSMn odeeffannoo argateen Koreen sadarkaa Oromiyaa kun Addisuu Araggaatiin kan hoogganamu yoo tahu,hanga gandaatti Qindeessituun Koree Ayyaana kanaas dhaabbatee jira. Qophileen faaruu “immiyyee Itoophiyaa fi immiiyyee Minilik” baandiwwan magaalaa fi Maarshii Poolisiitin shaakalaama jiran. Garuu ijoolleen baandii baayyeen waan harkatti didaniifi guddoo waan milka’aa jiran hin fakkaatan ammaaf.
Tahus, gidiraan yeroo ammaa maqaa Ayyaana kanaatin xaxamaa jiru kaayyoo Koloneel Abiyyi Ahimad Sagantaa Minilik 2ffaa itti fufsiisuuf qabatee kahe keessaa kan duraati jechuudhaan qeequ kanneen dubbii keessa beekan.
Utuu Dr. Abiyyi Ahemad aangoo biyyattii hinqabanne ta'ee OPDO'n maal gochuuf turan?OPDO fi Dr. Abiyyi maaltu wal dhabsiise?
Salphoon Amma Lafa Irra Ejjettu Nama Irra Ejjetti!